Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Isan'ny firenena tratran'ny variana Omicron vaovao mitombo
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Tao anatin'ny sakoroka eran'izao tontolo izao nateraky ny Omicron, firenena maro no namerina ny fameperana fitsangatsanganana mba hamerana ny fiparitahany.
Satria ny variana Omicron an'ny otrik'aretina COVID-19 dia hita voalohany tany Afrika Atsimo, mihabetsaka ny firenena eran'izao tontolo izao mitatitra ny fahatongavan'ilay virosy vaovao any amin'ny faritaniny.
Ny karazana COVID-19 vaovao dia mampanahy ny mpitsabo satria mety hiteraka fanamby amin'ny vaksiny izany. Na izany aza, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia manizingizina fa mbola tsy misy porofo ara-tsiansa momba ny halehiben'ny soritr'aretin'ny otrikaretina raha ampitahaina amin'ny variana hafa COVID-19.
Nandritra izany fotoana izany, tao anatin'ny sakoroka maneran-tany nateraky ny Omicron, firenena maro no namerina ny fameperana fitsangatsanganana mba hamerana ny fiparitahan'izy io.
Alarobia nahita ny Etazonian'i Amerika mitatitra ny tranga voalohany voamarina momba ny variana Omicron any Kalifornia, taorian'ny nandehanan'ny mpandeha iray, izay vita vaksiny tanteraka, niverina avy any Afrika Atsimo tamin'ny 22 Novambra. efa vita vaksiny na tsia.
Nahitana trangana Omicron telo ny tompon’andraikitra any an-toerana, ka ny iray any amin’ny nosy La Réunion ary ny roa any amin’ny tanibe Frantsa. Amin'ireo tranga rehetra ireo, vao haingana ireo olona ireo no nitety an'i Afrika.
Androany, nanambara ny tranga voalohany voamarina momba ilay aretina i India taorian'ny fitiliana ny lehilahy roa tao amin'ny fanjakan'i Karnataka rehefa niverina avy tany ivelany. Nataon’ny tompon’andraiki-panjakana ho eo ambany fanaraha-mason’izy ireo izy ireo ary ny fifandraisana voalohany sy faharoa rehetra dia voazaha toetra sy andrana.
Ny firenena Nordic dia nanamafy otrikaretina marobe tamin'ny mutation COVID-19, na dia iray amin'ireo voakasik'izany aza dia fantatra fa nanatrika fampisehoana niaraka tamin'ny mpanatrika 2,000 teo ho eo talohan'ny fitsapana tsara. Na dia tsy mbola nampidirina aza ny politikam-pirenena, dia nakaton'i Danemark ny sekoly iray izay nahitana tranga ahiahiana noho ny tahotra fa mety hiteraka fipoahana lehibe kokoa izany.
Olona roa ao amin'ny kaominina morontsiraka andrefan'i Oeygarden no niatrika fitsapana tsara Omicron tamin'ny alarobia, nanamarika ny tranga voalohany tamin'ny variana tany Norvezy, satria ny faritra dia niharan'ny fihanaky ny areti-mifindra izay nitarika ho amin'ny fanamafisana ny fameperana eo an-toerana. Ny mampanahy kokoa ho an'ny tompon'andraikitra dia ny firenena amin'izao fotoana izao dia manadihady vondrona lehibe misy tranga 50 farafahakeliny mifandray amin'ny fety Krismasy.
Rehefa namerina namerina ny fameperana COVID-19, anisan'izany ny baikon'ny saron-tava, ny UK Health Security Agency dia nanamafy fa, manerana an'i Angletera sy Skotlandy, dia tranga 32 amin'ny variana vaovao no hita, raha toa kosa i Irlandy Avaratra sy Wales dia tsy nandrakitra otrikaretina vaovao iray tamin'ny mutated. fanerena.
Ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana dia nahitana tranga sivy voamarina momba ny Omicron misy otrikaretina valo any Nouvelle-Galles Atsimo ary iray any amin'ny Faritany Avaratra. Nampitandrina ny firenena ny tompon'andraikitra, noho ny tahotra fa mety hisy tranga maro kokoa rehefa avy nitsidika toeram-pivarotana be atao ny iray tamin'ireo olona voan'ny areti-mifindra alohan'ny hizaha toetra tsara.
Ny alakamisy, Failandy ary Singapore nanamafy ny fisian'ny tsipika vaovao, raha Romania koa matahotra fa efa misy tranga iray.